IPhone 7 kuchengetedza kwaizotanga musi waGunyana 9 | IPhone nhau
Pre-maodha eiyo iPhone 7 yaizotanga munaGunyana 9; Keynote pazuva rechishanu?
Pese patinotaura nezverunyerekupe tinonyevera kuti tinofanira kuramba takakahadzika kudzamara chimwe chinhu chave pamutemo. Dzimwe nguva makuhwa aya haana hwaro uye dzimwe nguva anogona kuchinja. Iyo yekupedzisira ndiyo yakaitika kune hukuru kana hushoma padanho rehurukuro uye kuvhurwa kweiyo iPhone 7 mushure meEvan Blass, anonyanya kuzivikanwa nekuve anoburitsa leaker paTwitter, akavimbisa kuti kuvhurwa kweiyo iPhone 7 kwaizoitika muvhiki yaGunyana 12.
Nhasi evleaks akatumira tweet ichitipa zuva racho inogona kubhuka iyo iPhone 7 munyika dzekutanga, idzo pamwe dzichava United States, Germany, France, United Kingdom, China nevamwe, September 9. Nyika iyo server inonyora, Spain yanga isiri muboka rekutanga renyika mumakore achangopfuura, asi izvi zvinogona kuchinja nekuti Europe yave kuita yakakosha nzvimbo yekutengesa yeApple mushure mekudzikira kwekutengesa kwakatambura muChina.
Iyo mharidzo yeiyo iPhone 7 ndeye vhiki kutanga
Yakasimbiswa: Pre-maodha anotanga musi wa9. Unogona kuwedzera zuva rekutanga chiitiko kubva ipapo. https://t.co/gwoPzIM1dI
- Evan Blass (@evleaks) July 28, 2016
Kwasimbiswa: kuchengetedza kwatanga musi wa 9. Unogona kudhonza zuva rekutanga kubva pano.
iPhone 2016 kuburitswa: vhiki yaGunyana 12th.
- Evan Blass (@evleaks) July 23, 2016
Iyo yapfuura tweet, inova chinongedzo chakabatanidzwa mune iyo tweet iyo evleaks yakatumirwa nhasi, yakatiudza kuti iyo iPhone 7 kuvhurwa ichave iri pavhiki yaGunyana 12. Kunyangwe "kuvhurwa" kunoreva kuratidzwa kana kuburitswa, Blass yaive isiri muna Chikunguru 23, saka izvo "Kusimbiswa" isuwo tinofanirwa kuitora netweezers. Chero zvazvingaitika, kana tikatarisa kumashure zvinoita sezviri pachena kuti iyo iPhone 7 ichaunzwa chero muvhiki yaGunyana 5 kana muvhiki regumi nemaviri remwedzi mumwe chete.
Kana isu tikasafuratira iyo imwe firita yenguva, OnLeaks inoti iyo iPhone 7 ichave iine dhizaini yakafanana neiyo iPhone 6 / 6s, isina headphone port, mbiri kamera uye Smart Connector pane Plus modhi uye bhatani repamba rinobata, pakati pezvimwe zvinhu. Semazuva ese, isu tinogona chete kuramba takamirira, asi isu tine zvishoma uye zvishoma kuti tizive zvese zvizere zviri pamutemo
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Pre-maodha eiyo iPhone 7 yaizotanga munaGunyana 9; Keynote pazuva rechishanu?
Apple inobvisa zvimwe zvitupa zvinoshandiswa muiyo iOS 9.3.3 jailbreak kuburikidza neSafari
Chrome browser yeIOS ikozvino inotsigira AMP